Indlela Yokufumana Iingcamango Ezingqinisisiweyo Eziphambili
Ukufunda kwiNgcamango ePhambili ebalulekileyo
Okokuqala, ngaphambi kokuba singene kwiingcamango ezibalulekileyo ezicetywayo kunye neengcinga, kufuneka ukwazi ukuba yintoni imbono ephambili kwindawo yokuqala. Kuthetha ukuthini xa uprofesa okanye utitshala ecela ukuba unqume ingcamango ephambili yomhlathi, isicatshulwa, isahluko okanye kwincwadi? Ingcamango ephambili yomhlathi, isicatshulwa, okanye isahluko siyinqaku lesicatshulwa, susa zonke iinkcukacha. Ingcamango ephambili ngumfanekiso omkhulu.
Yiloo nto uxelela abantu xa bakubuza oko wenze ngoMgqibelo ophelileyo. Usenokuthi, "Ndaya kuma-movie," kunokuba ndithi, ndagqitha kwisitimela ukuze ndibonise i-movie entsha kaChanning Tatum apho ephosa khona iplanethi kunye namaqela kunye noluthando lwakhe olude lwaqala ukuqala ubomi obutsha Pluto. Ndadla i-popcorn, ndisebenzisa indlu yokuhlanza, ndahlamba izandla, ndaza ndashiya indawo yeshashalazi ndabuyela kwindlu yam. Ingcamango ephambili ibanzi ngokubanzi endaweni ethile.
Yisistim Solar kunye namaeplanethi. Umdlalo webhola lebhola ngokumelene nabalandeli, ama-cheerleaders, i-quarterback, kunye neyunifomu. Yiyo i-Oscars kunye nabadlali, i-carpet ebomvu, iingubo zokugqoka kunye nefilimu.
Ngoko, uyifumana njani ingcamango ebalulekileyo? Iindaba ezilungileyo? Kulula kakhulu xa kuthelekiswa nokucinga ngcamango eyintloko. Funda ukulungiselela iinkcukacha.
Ulwazi olungakumbi malunga nendlela yokufumana ingcamango ephambili
Yiyiphi Ingcamango Eyona Ncoko?
Ngamanye amaxesha, umfundi uya kufumana inhlanhla kwaye ingcamango ephambili iya kuba yimbono ephambili ebhaliweyo , eyona nto elula ukuyifumana kwinqanaba.
Kubhaliwe ngqo kwitekisi. Ngamanye amaxesha abalobi beza ngaphandle kwaye babhale ingcamango ephambili kwisigcaziso sezizathu ezahlukeneyo-abafuni ukuba uphelelwe ngongoma, ngaba ngabalobi abatsha kwaye abazange baqikelele ubugcisa bobuqhetseba, bathanda ubhalo olucacileyo nolwazi . Naluphi na isizathu, kulukho ukulinda; ufuna nje ukuyifumana.
Buza lo mbuzo kuwe: "Yithini le nqanawa?"
Ngamazwi akho, chaza impendulo kwisigwebo esifutshane. Akubandakanyi iinkcukacha okanye imizekelo evela kumbhalo. Musa ukwandisa ingcamango yakho ngaphaya kokubhaliweyo kwitekisi, nokuba uyazi itoni malunga nesihloko. Akunandaba nalomsebenzi.
Khangela isivakalisi kwisicatshulwa esondelelene kakhulu nesishwankathelo sakho esifutshane.
Umzekelo oyiNtloko Umbono:
Ngenxa yokuba i-Intanethi ikhona kwihlabathi elisele lilawulwe ngemigaqo nemithetho, amagosa karhulumente, abaxhasayo bemithetho yangoku kunye nezwi labantu, kufuneka ekugqibeleni baxanduva lolawulo lwe-Intanethi. Ngolu xanduva luvela kumsebenzi omkhulu wokulawula ukukhuselwa kwamalungelo okuQuqulwa kokuQala kunye nokuhlonipha intlalo yoluntu nakwihlabathi jikelele. Oku kuthethwa kukuba, uxanduva oluphezulu luhlala kwizandla zabasebenzisi be-intanethi abavotayo-bona, kunye namagosa akhethwe ukuba bakhonze, bakha uluntu jikelele. Abavoti banako ukukhetha abantu abanomdla kwizithuba ezifanelekileyo, kwaye amagosa akhethiweyo anembopheleleko yokwenza ngokuthanda kwabantu.
Ingcamango ephambili apha "... amagosa karhulumente ... kufuneka ekugqibeleni abe noxanduva lolawulo lwe-Intanethi." Le ngongoma ephambili ebhaliweyo kuba ibhalwe ngokuthe ngqo kwitekisi. Isivakalisi sigxile ngokupheleleyo intsingiselo yendima ngokupheleleyo. Awuhambi ngaphaya kokubhaliweyo okubhaliweyo ngaphandle kobunzima bebakala, kwaye ayisebenzisi i-specific pass passage in it, nokuba.
Ufuna ukuguqula loo miqondo eyintloko? Nazi ezinye iincwadi zokusebenzela!
Indlela Yokufunda Ngobusuku Ngaphambi Kovavanyo
Yondla Ubomi Bakho: Ukutya Okuhle Kokutya ngaphambi kokuba Uvavanyo
Uluphi uphawu olunzima?
Iinkqubo zoPhicotho zoFundo kunye namaCandelo
Ukubhala okuBhaliweyo Ukukhuthaza abafundi beZikolo eziPhakamileyo
I-Hamlet Character Analysis
IiRebethi zeRedstone: I-Piece of Space Exploration History
Adms College Admissions
Indlela Yokubhala I-Strong Chord Progressions for Your Guitar Songs
Indlela yokudibanisa "Ukuhlambalaza" (ukudideka) ngesiFrentshi
Ubomi Kwi-Grassland Eyingozi
Iimvumi zeeNgcaciso ezingcono
Kutheni Iimpawu zePenciloni zikhuni kangaka kwi-Paarlcolor?
Indlela Yokwenza I-Rainbow Yemibala Yemibala
Iipolonom Worksheets - Izimpendulo kumaphepha e-2 e-PDF
Indlela Yobhentshi Ukubhenywa Kwakho I-Cylinder yakho
Isifundo samalanga onke esiMatarin: "Siphezulu" ngesiTshayina
Ibali le-Ellen DeGeneres 'Liya kwiStardom
I-Stonehenge: Isishwankathelo se-Archaeological Findings kwisikhumbuzo seMegalithic
Iikhemikhali Akufanele Uxube
Njani i-Eclectic (okanye i-Eclectic Tournament) Isebenza kwiGalofu
Eminem 'I-Marshall Mathers LP 2'
Ziziphi ii-Doughboys zeMfazwe Yehlabathi I?